ရေရှည် Fapstronaut မှသိကောင်းစရာ ၃ - စစ်မြေပြင် - သင့် ဦး နှောက်ကိုလှုပ်ရှားစေခြင်း
တစ်ဦး Long Term Fapstronaut ထံမှအကြံပေးချက် 3: အ Battlefield ရွှေ့
သိမှတ်ဖွယ်3ကျရှုံးဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံသောနေရာများရှာဖွေ multi-ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမကထပြုသူနှင့်ယင်း 12 ခြေလှမ်းလိင်စွဲလမ်းပြန်လည်နာလန်ထူမိတ်သဟာယဖွဲ့ထဲမှာယောက်ျားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်၌ငါတသမတ်တည်းရုန်းကန်ခြင်းနှင့်ကျရှုံးသောသူတို့အား nofap ဖို့ရုန်းကန်စောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်သာ pornfree သောသူတို့အားဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပါပွီ။ သူတို့ဟာတသမတ်တည်းအဆိုပါချောက်ထဲတဘက်၌သူတို့ကျောတက်နှင့်အတူကာကွယ်ရေးကစားနေကြသည်။ တစ်ခုမှာအမှားနှင့်သူတို့ fapping သို့မဟုတ် porn သို့မဟုတ်သမျှသူတို့ရဲ့အောက်ခြေလိုင်းအပြုအမူတွေဖြစ်ကြသည်မှာရှာဖွေနေထဲသို့အစွန်းကျော်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီမှလွတ်မြောက်ရန်နှင့်အစားပြစ်မှု play? သူတို့အားဆင်ခြေများနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရားအလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုအရပ်၌စစ်ကူရှိရာအခြားထွက်ရှာ, ငါ့အပြုအမူတွေကိုအဘို့အကြှနျုပျ၏ဆင်ခြေများနှင့်ဆင်ခြင်တုံတရား Define ။ အဲဒီလမ်းကိုငါစစ်တိုက်ဆုံးရှုံးပေမယ့်စစ်ပွဲအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်။
'ငါမည်သူမဆိုနာကျင်မဟုတ်ပါဘူး။ ' '
'' အဘယျသို့သူမသိကြပါဘူးသူမ၏ထိခိုက်လိမ့်မည်မဟုတ် ''
'' သူမသာဟုတ်ကဲ့ဆိုပါတယ် အကယ်. ငါသည်ဤပြုကြရန်ရှိသည်မှာမဟုတ်ဘူး ''
'' သူသည်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ယူပါလျှင်ကျွန်မသူမ၏နှင့်အတူလိင်ရှိသည်ဖို့လို ''
'' ကအရေးပါတူသောဒါဟာမဟုတ်ပါဘူး။ ''
'' မနက်ဖြန်ကျရှုံးဒီနေ့မအောင်မြင်။ ပျက်ကွက်ခြင်းအမှတ်ဘာဒါအာမခံသလဲ? ''
'' ကျွန်တော်ကောင်လေးကမနှင့်ယောက်ျားလေးများယောက်ျားလေးများပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောအမြိုးသမီးမြားကလကျခံပါ ''
နှင့်ပေါ်နှင့်ပေါ်နှင့်စသည်တို့ကိုကြော်ငြာ nauseum ပေါ်မှာ။
ယင်းကိုမည်သို့ကူညီသနည်း? ကောင်းပြီ, ဒီငါဆင်ခြေကိုသုံးပါတစ်ခုတည်းသောဧရိယာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါနေရာတိုင်းငါပိတ်ဆို့တားဆီးစေခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းတဲ့အရာလုပ်နေတာတရားမျှတချင်သူတို့ကိုအသုံးပြုပါ။ အဘယ်သို့ငါကလူမသိရပါဘူး (ကျနော်အနေနဲ့ asshole နဲ့တူမောင်းသောအခါငါအမည်မသိဖြစ်ကြောင်းကို) သူတို့ကိုထိခိုက်လို့မရဘူး, ငါအဖြစ်အလျင်အမြန်ငါ (ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး) လုပ်နိုင်အဖြစ်သွားချင်ဘယ်မှာရဖို့ထိုက်ကြောင့်လူထုံနဲ့တူမောင်း, လူတိုင်းကမ နှင့်အခြားလူတွေကိုကိုယ့်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ဘူးပုံမှန်မောင်းလျှင်။ ငါ fapping နှင့်ညစ်ညမ်းတရားမျှတရန်အသုံးပြုအတူတူဆင်ခြေ။ ငါအဘယ်သူမျှမငါ (ကအရေးမပါဘူး) တူအောင်အဘယ်အရာကိုဂရုစိုကျငါ (ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေး) လိုတဲ့အခါငါလိုချင်တာတွေစားရန်ထိုက်သောကွောငျ့အစာကိုစား, လူတိုင်းအတွက်တခါတရံ binges, ငါသည် (ငါ့ကို မှလွဲ. ) မည်သူမဆိုနာကျင်မဟုတ်ပါဘူးစသည်တို့ကို binge အလုပ်မှာပျင်းရိသူတို့ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်မသိသောအရာကိုသူတို့အကြှနျုပျအဘို့ထဲကကြည့်ရှုလျှင်, လူတိုင်းကမ, ငါသည်စသည်တို့ကိုထိုသူတို့အဘို့ကိုထုတ်ကြည့်ရှုလို့
ဘယ်မှာဒီအကြောင်းပြချက်တွေဘဝမှာအလုပ်မှာငါအိမ်မှာ, အသွားအလာအတွက်အလုပ်မှာအကြှနျုပျ၏မှောငျမိုကျဘက်ဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲနိုင်ပြီးညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် fapping မှာရှာနေစရာမလိုဘဲရံဖန်ရံခါဆုံးရှုံးနေကြဖော်ထုတ်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါနဲ့မနေ့ကအလုပ်မှာ slacked နှင့်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါနောက်ဆုံးညဥ့်သိပ်စားငါ့ရေဒါပေါ်မှာဖြစ်ပြီးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီမျက်နှာစာပေါ်စစ်တိုက်တိုက်ခိုက်နေငါလိုက်တဲ့အခါကျွန်မရဲ့ porn / fapping စှဲသို့ချော်ကြပါဘူး။ ငါသည်လည်းလမ်းတစ်လျှောက်အကောင်းတစ်သူတစ်ဦးဖြစ်လာငါစောင့်ရှောက်တာကိုတန်ဖိုးရှိဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဘဝ၌ငါ့လမ်းလာသောကောင်းသောအရာခံထိုက်နဲ့တူခံစားရရန်စတင်။ ငါကျန်းကျန်းမာမာလမ်းအတွက်ကိုစားယခုအခါစိတ်ကောင်းသောလမ်းအတွက်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ယခုအများကြီးပိုကောင်းအလုပ်သမားဖြစ်ကြောင်းကို နှင့် ငါ FAP သို့မဟုတ် porn ကိုကြည့်ကြဘူး။